Ducfaddii Koowaad ee Jaamacadda Jamhuuriya oo maanta qalinjabisay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Ducfaddii Koowaad ee Jaamacadda Jamhuuriya oo maanta qalinjabisay
Ducfaddii Koowaad ee Jaamacadda Jamhuuriya oo maanta qalinjabisay
Muqdisho (XT): Xaflad qalin jabin ah oo si heersare ah loo soo agaasimay taasoo ay kasoo qeybgaleen madaxda ka socoto dowladda, masuuliyiin ka socda Jaamacadaha, Rugta Gaacsiga Soomaaliyeed, bulshada rayidka ah, waalidiin, macallimiin iyo marti sharaf kale ayaa maanta lagu qabtay Huteelka SYL ee magaalada Muqdisho.
Xafladdan ayaa lagu abaalmariyay arday tiradoodu ay gaareysa 250 oo dhameystay afar takhasus oo ay Jaamacadda bixiso oo kala ah Kulliyadda Caafimaadka, Culuumta Kumbuyuutarka, Maamulka iyo Gaacsiga iyo Injineeriyada.
Ardaydaasi waxaa kamid ahaa hooyo Madiino Nuur Xuseen oo dhameysay Kulliyadda Maamulka iyo Ganacsiga, waxaana farxadda la qeybsaday wiilasheeda oo mid kamid ah ay uu haysto shahaado jaamacadeed. “Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. Maanta waa maalin igu qaali ah maadaama ay farxadda ila qeybsanayaan wiilashayda iyo walaalahay.” Ayay tiri Madiino warbaahinta la hadlaysay xafladda kaddib.
Maxamuud Cabdikariim Gabeyre oo ah Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed oo xafladda ka hadlay ayaa u hambalyeeyay bahda Jamhuuriya, waalidiinta usoo dhabar adaygay intii ay ubadkoodu jaamacadda dhiganayeen iyo ardayda qalinjabisay laftooda, isaga oo ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka faa’iideystaan dhallinyaradan. Mudane Gabeyre ayaa sheegay in shaqo la’aantu ay dhallinyarada ku keeni karto in si khaldan looga faa’iideysto haddii aysan helin fursado ay noloshooda ku maareeyaan.
Guddoomiyaha Jaamacadda Jamhuuriya ee Sayniska iyo Tiknoolajiyada Mudane Inj. Maxamuud Axmed Jimcaale ayaa u hambalyeeyay ardayda qalin jabisay isaga oo kula dardaarmay in ay astaan wanaagsan u noqdaan Jaamacadda. Wuxuu sidoo kale intaa raaciyay in Jaamacadda Jamhuuriya ay mar walba u taagantahay in ay soo saarto arday tayo leh oo aqoontooda ay u dheertahay wadaniyad iyo dal jacayl.
“Jaamacaddan waa mid aan faa’iido doon ahayn, balse waxaa asaas u ahaa in la helo Soomaali aqoon iyo akhlaaq wada socoto leh. Waxaan farxadda la wadaagayaa ardayda maanta qalinjabineysa. Waxaan dhihi karaa guushii ugu horreysay ee ay jaamacaddu gaarto waa tan maanta idiin muuqata.” Ayuu yiri Guddoomiye K/Xigeenka Maamulka Sare ee Jaamacadda Mudane Cismaan Cali Xalane.
Ugu dambeyntii, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Mudane Ismaaciil Yuusuf Cismaan ayaa u mahadceliyay maamulka iyo macallimiinta Jaamacadda Jamhuuriya dadaalka ay ku bixiyeen ardaydan, isaga oo kula taliyay in ay sii labo laabaan dadaalkooda. Agaasimaha waxa uu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay in Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ay mar walba u taagantahay sidii Jaamacada Dalka looga dhigi lahaa kuwo tayo leh.
Previous articleXabadihii Lagu Difaaci Lahaa ayaa Lagu Dilayaa
Next articleJAGO BANNAAN: Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo doonaya Sharci yaqaan.